Imigaqo kunye neMeko yeVenkile- uMvuzo weSiseko
Ikhaya Imigaqo kunye neMeko yevenkile
Ukusetyenziswa kwakho kwezinto ezinamaphepha-mvume (njengoko kuchaziwe apha ngezantsi) kuxhomekeke ngokungqongqo kwimigaqo nemiqathango equlethwe kule License Resource Licence (le "License"). Le layisensi sisivumelwano esisibophelelayo ngokusemthethweni phakathi kwakho noMvuzo weSiseko ngokunxulumene nokusebenzisa kwakho izinto ezinelayisensi. Ngokusebenzisa iMathiriyeli enelayisensi uyaqinisekisa ukuba uyayamkela imiQathango nemiQathango phantsi kwale Mvume kwaye uyavuma ukuba ubotshelelwe yiyo. Nceda ufunde iMigaqo neMiqathango phantsi kwale License ngocoselelo.
1.1 Le Migaqo neMeko iya kulawula ukuthengiswa kunye nokubonelelwa kwezixhobo zekhosi ezikhuphelayo kwiwebhusayithi yethu. Zikwabandakanya ukusetyenziswa okulandelayo kwezi zifundo.
1.2 Uya kucelwa ukuba unike isivumelwano sakho esicacileyo kule Migaqo neMiqathango ngaphambi kokuba ufake i-odolo kwiwebhusayithi yethu.
1.3 Olu xwebhu aluchaphazeli nawaphi na amalungelo asemthethweni onokuba nawo njengomthengi.
1.4 Umgaqo-nkqubo wethu wabucala unokuba njalo kujongwa apha.
1.5. Uyavuma ukuba umxholo oqulethwe kwezi zifundo ungabonakala ungathandekiyo kwabanye abantu. Ijongene nokuziphatha ngokwesondo. Onke amanyathelo afanelekileyo athathiwe kukuqinisekisa ukuba akukho zixhobo zamanyala ziboniswayo. Siye saqinisekisa ukuba ulwimi luyahambelana nomxholo oxoxwa ngabantwana. Ngokwamkela le Mimiselo neMiqathango uyawamkela umngcipheko waso nasiphi na isiphazamiso okanye iimvakalelo ezibuhlungu ezinokuvela kulungiselelo lwesifundo okanye ukusiwa kwalo.
1.6 Ukuthintela ukuthandabuza, le Mvume yokusebenzisa ezi zixhobo ayiniki ubunini bezinto ezinelayisensi.
2.1 Kule Migaqo neMeko:
(a) “thina” kuthetha uMbutho weSiseko, uMbutho waseScotland oHlanganisiweyo oManyanisiweyo phantsi komthetho weScotland onenombolo yesisa SCO44948. Iofisi yethu ebhalisiweyo yile: Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom. (kwaye "thina no" wethu "kufuneka bathathwe ngokufanelekileyo);
(b) “wena” uthetha umthengi wethu okanye umntu oza kuba ngumthengi phantsi kwale Migaqo neMiqathango (kwaye “eyakho” mayithathwe ngokufanelekileyo);
(c) "izixhobo zekhosi" zithetha ezo zixhobo zekhosi ezikhoyo zokuthenga okanye ukhuphelo simahla kwiwebhusayithi yethu;
(d) "izixhobo zakho zekhosi" zithetha naziphi na izixhobo zekhosi ozithengileyo okanye ozikhuphele simahla kwiwebhusayithi yethu. Oku kubandakanya naluphi na uhlobo oluphuculweyo okanye oluhlaziyiweyo lwezixhobo zekhosi esinokuthi sizenze zifumaneke kuwe amaxesha ngamaxesha;
(e) “ilayisensi” inentsingiselo enikwe kwintshayelelo yale layisenisi; kwaye
(f) "Izinto ezinelayisensi" zithetha umsebenzi wobugcisa okanye wokubhala, umfanekiso, ividiyo okanye ukurekhodwa kweaudiyo, uvimba weenkcukacha, kunye / okanye ezinye izinto ezibonelelwe nguwe nguMnini-layisenisi ukuba uzisebenzise phantsi kwale Mvume. Umnini welayisensi uthetha uMvuzo weSiseko, umbutho waseScotland oBumbeneyo oManyanisiweyo phantsi komthetho waseScotland ngenombolo yesisa SCO44948. Iofisi yethu ebhalisiweyo yile: Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom.
(g) "Iphepha-mvume lomntu" lithetha iLayisensi ethengwe, okanye yamkelwe simahla ngumntu, ukuze ayisebenzisele ukufundisa. Ayinakudluliselwa kwabanye abantu, iye kwisikolo okanye kwiziko.
(h) “Ilayisensi yeMultiple-User” yiLayisensi ethengiweyo, okanye eyamkelweyo simahla, sisikolo okanye elinye iziko elinokuthi lifumaneke ukuze lisetyenziselwe ukuhambisa iinkonzo zemfundo.
3. Inkqubo yoku-odola
3.1 Intengiso yezixhobo zekhosi kwiwebhusayithi yethu zenza "isimemo sokunyanga" endaweni yesivumelwano.
3.2 Akukho khontrakthi izakuqala ukusebenza phakathi kwakho nathi ngaphandle kokuba kwaye de samkele iodolo yakho. Oku kuya kuhambelana nenkqubo ebekwe kweli Candelo 3.
3.3 Ukungena kwisivumelwano ngekhontrakthi kwiwebhusayithi yethu ukuthenga okanye ukufumana izixhobo zekhosi zasimahla ezinokukhutshelwa kuthi, kufuneka kulandelwe la manyathelo alandelayo. Kuya kufuneka ungeze izixhobo zekhosi onqwenela ukuzithenga kwiBhasikithi yakho yokuthenga, emva koko uqhubeke nokuphuma; ukuba ungumthengi omtsha, unokukhetha ukwenza iAkhawunti nathi kwaye ungene; kubathengi babucala, iiAkhawunti zinokukhetha, kodwa kunyanzelekile kubathengi beshishini; ukuba ungumthengi okhoyo, kufuneka ufake iinkcukacha zakho zokungena; nje ukuba ungene ngemvume, kuya kufuneka uvume ngokwemigaqo yolu xwebhu; uya kugqithiselwa kwiwebhusayithi yethu yomboneleli ngenkonzo, kwaye umboneleli ngenkonzo yentlawulo uya kuyiphatha intlawulo yakho; Emva koko siya kukuthumela isiqinisekiso somyalelo. Okwangoku iodolo yakho iya kuba sisivumelwano esibophelelayo. Ngaphandle koko, siya kuqinisekisa nge-imeyile ukuba asikwazi ukuhlangabezana ne-oda yakho.
3.4 Uya kuba nethuba lokuchonga kunye nokulungisa iimpazamo zokufakelwa ngaphambi kokwenza iodolo yakho.
4.1 Amaxabiso ethu acatshulwe kwiwebhusayithi yethu. Apho amaxabiso acatshulwa njenge- £ 0.00, iphepha-mvume lisaza kusebenza, nangona kungekho mali iya kuhlawuliswa.
4.2 Siza kuthi ngamaxesha ngamaxesha sitshintshe amaxabiso acatshulwe kwiwebhusayithi yethu. Oku akuyi kuchaphazela iikontrakthi ebeziqale ukusebenza.
4.3 Zonke iimali ezichaziweyo kule Migaqo neMeko okanye kwiwebhusayithi yethu zichazwe ngokukodwa kwi-VAT. Asiyihlawulisi iVAT.
4.4 Amaxabiso abonisiweyo kwisifundo ngasinye okanye inyanda yeyomntu othenga iLayisensi ayisebenzisele yona.
4.5 Apho izikolo, amaziko kunye namanye amaziko eenkampani anqwenela ukuthenga okanye ukufumana ukhuphelo simahla lwezixhobo zethu zekhosi, kufuneka bathenge iLayisensi yabasebenzisi abaninzi. Oku kuxabisa amaxesha ama-3.0 eLayisensi nganye. Ingasetyenziselwa ngaphakathi esikolweni okanye kwiziko kwaye ayiyi kubotshwa kuye nawuphi na utitshala okanye umsebenzi. Apho izinto zinikezelwa simahla, ummeli othenga simahla egameni lesikolo, umbutho okanye elinye iqumrhu kusafuneka ukuba akhethe ilayisensi yabasebenzisi abaninzi ukuqinisekisa ukuba ubudlelwane obufanelekileyo bezomthetho busekiwe phakathi kweReward Foundation kunye umnini welayisenisi.
5.1 Kuya kufuneka, ngexesha lenkqubo yokuphuma, uhlawule amaxabiso ezinto zekhosi ozi-odayo. Ixabiso elikhethiweyo kufuneka lilungele uhlobo lwelayisensi ekhethiweyo, ilayisensi yomntu ngamnye okanye ilayisensi yabasebenzisi abaninzi.
5.2 Iintlawulo zingenziwa ngayo nayiphi na indlela evunyelweyo echazwe kwiwebhusayithi yethu amaxesha ngamaxesha. Okwangoku samkela kuphela iintlawulo ngePayPal, nangona oku kuvumela ukusetyenziswa kwawo onke amakhadi amakhulu etyala kunye namatyala ebhanki.
6. Ukukhutshwa kwelayisensi yezinto zekhosi
6.1 Siza kubonelela ngezixhobo zakho zekhosi kuwe kwifomathi okanye kwifomathi ezichaziweyo kwiwebhusayithi yethu. Siza kwenza njalo ngeendlela kwaye nangamaxesha njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi yethu. Ngokubanzi, ukuhanjiswa kwe-imeyile evumela ukhuphelo phantse kube kwangoko.
6.2 Ngokuxhomekeke kwintlawulo yakho yexabiso elifanelekileyo kunye nokuthotyelwa kwale Migaqo neMiqathango, sikunika iphepha-mvume lehlabathi lonke, elingaphelelwa lixesha, elingabalulekanga, nelingadluliswanga ukwenza naluphi na uhlobo lwezixhobo zekhosi yakho ezivunyelwe liCandelo 6.3, ukubonelela Awunakuze naphantsi kwazo naziphi na iimeko usebenzise naziphi na izixhobo zekhosi yakho ezingavunyelwanga liCandelo 6.4.
6.3 "Ukusetyenziswa okuvumelekileyo" kwezixhobo zekhosi yakho zezi:
(a) ukukhuphela ikopi nganye yezixhobo zekhosi;
(b) kwiiLayisensi zomntu ngamnye: ngokunxulumene nezixhobo ezibhaliweyo kunye negraphical zekhosi: ukwenza, ukugcina kunye nokubukela iikopi zezixhobo zekhosi yakho ezingekho ngaphezulu kwe-3 i-desktop, ilaptop okanye iikhompyuter zeencwadana, abafundi beencwadi zeencwadi, ii-smartphones, iikhompyuter zethebhulethi okanye izixhobo ezifanayo;
(c) kwiiLayisensi zabasebenzisi abaninzi: ngokunxulumene nezixhobo ezibhaliweyo kunye negraphical zekhosi: ukwenza, ukugcina kunye nokujonga iikopi zezinto zakho zekhosi ezingekho ngaphezulu kwe-9 kwidesktop, ilaptop okanye iikhompyuter zeencwadana, abafundi beencwadi zeencwadi, ii-smartphones, iikhompyuter zethebhulethi okanye izixhobo ezifanayo ;
(d) kwiiLayisensi zomntu ngamnye: ngokunxulumene nezixhobo zekhosi yeaudio kunye nevidiyo: ukwenza, ukugcina nokudlala iikopi zezinto zakho zekhosi ezingekho ngaphezulu kwe-3 desktop, ilaptop okanye iikhompyuter zamanqaku, ii-smartphones, iikhompyuter zethebhulethi, abadlali beendaba okanye izixhobo ezifanayo;
(e) yeeLayisensi zabasebenzisi abaninzi: ngokunxulumene nezixhobo zekhosi yeaudio kunye nevidiyo: ukwenza, ukugcina nokudlala iikopi zezinto zakho zekhosi ezingekho ngaphezulu kwe-9 kwidesktop, ilaptop okanye iikhompyuter zamanqaku, ii-smartphones, iikhompyuter zethebhulethi, abadlali beendaba okanye izixhobo ezifanayo ;
(f) kwiiLayisensi zomntu ngamnye: ukuprinta iikopi ezimbini zezifundo zakho ezibhaliweyo ezizezakho kuphela;
(g) kwiiLayisensi zabaSebenzisi abaninzi: ukuprinta iikopi ezi-6 zento nganye ebhaliweyo yezixhobo ezizezakho; kwaye
(h) izithintelo zokushicilela iiLayisenisi azisebenzi ekwenzeni izibonelelo ngeenjongo zokufundisa. Kwezi meko umda wabafundi abali-1000 uyasebenza.
6.4 "Ukusetyenziswa okungavumelekanga" kwezixhobo zekhosi yakho zezi:
(a) upapasho, ukuthengisa, ukukhupha amaphepha-mvume, ukugunyazisa, ukuhambisa, ukuhambisa, ukuhambisa, ukusasaza, ukuhambisa okanye ukwaba ngokutsha nayiphi na into yezifundo (okanye inxenye yoko) nakweyiphi na ifomathi;
(b) ukusetyenziswa kwaso nasiphi na isixhobo sezifundo (okanye inxenye yaso) nangayiphi na indlela engekho mthethweni okanye esaphula amalungelo omthetho wakhe nawuphina umntu phantsi kwawo nawuphi na umthetho osebenzayo, okanye nangayiphi na indlela ecekisekayo, engenasidima, enocalucalulo okanye eyenye echasayo;
(c) ukusetyenziswa kwaso nasiphi na isixhobo sezifundo (okanye inxenye yaso) ukukhuphisana nathi, nokuba kungokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo; kwaye
(d) nakuphi na ukusebenzisa urhwebo nakuphi na ukhuphelo (okanye inxenye yalo). Eli candelo alikuthinteli ukuhanjiswa kwezifundo ngokusekwe kwizixhobo, ngokubonelela ukuba akukho nto kweli Candelo 6.4 eya kuthintela okanye ikuthintele okanye nawuphina omnye umntu ekwenzeni nasiphi na isenzo esivunyelweyo ngumthetho osebenzayo.
6.5 Uqinisekisa kuthi ukuba uyakwazi ukufikelela kwiinkqubo zekhompyuter eziyimfuneko, iinkqubo zemithombo yeendaba, isoftware kunye nonxibelelwano lwenethiwekhi ukufumana nokonwabela izibonelelo zezifundo zakho.
6.6 Onke amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye namanye amalungelo kwizixhobo zekhosi ezinganikezelwanga ngokucacileyo yile Migaqo neMeko zigciniwe.
6.7 Kuya kufuneka ugcine, kwaye akufuneki ucime, ufihle okanye ususe, izaziso zelungelo lokushicilela kunye nezinye izaziso zobunini kuzo naziphi na izinto zekhosi.
6.8 Amalungelo owanikwe kule Migaqo nemiqathango ayimfihlo kuwe. Akufanele uvumele naliphi na iqela lesithathu ukuba lisebenzise la malungelo. Amalungelo onikezwe wona kwiiLayisensi zabasebenzisi abaninzi, kumda wokuthenga okanye kwiziko. Akufanele uvumele naliphi na iqela lesithathu ukuba lisebenzise la malungelo.
6.9 Umda wokusetyenziswa kwezi zinto kuthintelwe kubafundi abayi-1000 kwilayisensi nganye.
I-6.10 Ukuba wophula naliphi na ulungiselelo lwale Migaqo neMiqathango, ke iLayisensi ebekwe kweli Candelo 6 iya kupheliswa ngokuzenzekelayo xa ukwaphula oko.
6.11 Ungalinqumamisa iphepha-mvume elichazwe kweli candelo le-6 ngokususa zonke iikopi zezixhobo zekhosi ezifanelekileyo oziphethe okanye ozilawulayo.
6.12 Ukupheliswa kwephepha-mvume phantsi kweli Candelo 6, kufuneka, ukuba awukwenzi oko ngaphambili, ngokukhawuleza kwaye ngokungacimekiyo ucime iisistim zekhompyuter yakho kunye nezinye izixhobo zombane zonke iikopi zezixhobo zekhosi ezifanelekileyo oziphetheyo okanye ozilawulayo, kwaye ngokusisigxina ukutshabalalisa naziphi na ezinye iikopi zezixhobo zekhosi ezifanelekileyo osesandleni sakho okanye kulawulo lwakho.
7. Iimvumelwano zomgama: ilungelo lokurhoxisa
I-7.1 Eli candelo le-7 lisebenza ukuba kuphela xa unikezela ngesivumelwano nathi, okanye wenza isivumelwano nathi, njengomthengi- oko kukuthi, njengomntu osebenza ngokupheleleyo okanye ngaphandle korhwebo, ishishini, ubugcisa okanye ubungcali bakho.
I-7.2 Ungasirhoxisa isithembiso sokungena kwisivumelwano nathi kwiwebhusayithi yethu, okanye urhoxise ikhontrakthi ekungenwe kuyo nathi kwiwebhusayithi yethu, nangaliphi na ixesha kwithuba:
(a) ukuqala xa ungenisa umnikelo wakho; kwaye
(b) ephela ekupheleni kweentsuku ezili-14 emva kosuku ekungenwe ngalo kwisivumelwano, ngokuxhomekeke kwiCandelo 7.3. Akunyanzelekanga ukuba unike nasiphi na isizathu sokurhoxa okanye sokurhoxisa.
7.3 Uyavuma ukuba sinokuqala ngokubonelela ngezixhobo zekhosi ngaphambi kokuphela kwexesha ekubhekiswe kulo kwiCandelo 7.2. Uyavuma ukuba, ukuba siqala ukubonelela ngezixhobo zekhosi ngaphambi kokuphela kwelo xesha, uya kuphulukana nelungelo lokurhoxisa ekubhekiswe kulo kwiCandelo 7.2.
7.4 Ukuze urhoxise isithembiso sokuthenga okanye sokurhoxisa ikhontrakthi ngokwesiseko esichazwe kweli candelo le-7, kufuneka usazise ngesigqibo sakho sokurhoxisa okanye sokurhoxisa (njengoko kunokuba njalo). Ungasazisa nangayiphi na ingxelo ecacileyo ebonisa isigqibo. Kwimeko yokurhoxiswa, ungasazisa usebenzisa iqhosha 'leMiyalelo' kwiphepha leAkhawunti yam. Oku kuyakuvumela ukuba uqalise inkqubo yokubuyisela ukuthenga kwakho. Ukuhlangabezana nomhla wokurhoxiswa, kwanele ukuba uthumele unxibelelwano lwakho malunga nokusetyenziswa kwelungelo lokurhoxisa ngaphambi kokuba ixesha lokurhoxisa liphele.
7.5 Ukuba urhoxisa iodolo ngesiseko esichazwe kweli candelo le-7, uyakufumana imbuyiselo epheleleyo yemali obusibhatalela yona malunga nomyalelo. Ukuba awuhlawulanga mali ukugqiba iodolo, akukho mali iya kubuyiselwa.
7.6 Siza kubuyisa imali sisebenzisa indlela efanayo esetyenzisiweyo ukwenza intlawulo, ngaphandle kokuba uvumile ngenye indlela. Kwimeko nayiphi na into, awuyi kuhlawulwa nayiphi na imali ngenxa yokubuyiselwa kwemali.
7.7 Siza kuyenza imali oyibuyiselwe ngenxa yokurhoxiswa ngokwesiseko esichazwe kweli candelo 7. Ayizukulibaziseka ngokungafanelekanga kwaye, nangayiphi na imeko, kwithuba leentsuku ezili-14 emva komhla esixelelwe ngawo. Ukucinywa.
7.8 Nje ukuba ukubuyiselwa imali kuceliwe kwaye kuvunywe, konke ukukhutshelwa okungasetyenziswanga kuya kurhoxiswa.
8. Iwaranti kunye nokumelwa
8.1 Ugunyazisa kwaye usimele kuthi ukuba:
(a) ngokusemthethweni unakho ukungena kwizivumelwano ezibophelelayo;
(b) unegunya elipheleleyo, amandla kunye namandla okuvuma le Migaqo neMiqathango; kwaye
(c) lonke ulwazi osinike lona ngokunxulumene neodolo yakho luyinyani, luchanekile, luphelele, lukhona ngoku kwaye alulahlekisi.
8.2 Siqinisekisa kuwe ukuba:
(a) izixhobo zakho zekhosi ziya kuba ngumgangatho owonelisayo;
(b) izixhobo zakho zekhosi ziya kufaneleka ngokufanelekileyo kuyo nayiphi na injongo osazisa ngayo ngaphambi kokuba kwenziwe ikhontrakthi phantsi kwale Migaqo neMiqathango;
(c) izixhobo zekhosi yakho ziya kuhambelana nayo nayiphi na inkcazo esiyinikwe sithi; kwaye
(d) sinelungelo lokubonelela ngezixhobo zakho zekhosi.
8.3 Zonke iiwaranti kunye neenkcazo malunga nezixhobo zekhosi zichaziwe kule Migaqo neMiqathango. Ukuya kuthi ga kwelona nqanaba liphezulu livunyelweyo ngumthetho osebenzayo kwaye ngokuxhomekeke kwiCandelo 9.1, zonke ezinye iziqinisekiso kunye neenkcazo azibandakanyi ngokucacileyo.
9. Izithintelo kunye nokungabandakanywa koxanduva
9.1 Akukho nto kule Mimiselo neMiqathango eya kuthi:
(a) anciphise okanye ashenxise ityala lokufa okanye ukonzakala komntu ngenxa yokungakhathali;
(b) anciphise okanye ashenxise naluphi na uxanduva ngobuqhophololo okanye ukumelwa gwenxa ngobuqhetseba;
(c) anciphise nawaphina amatyala ngayo nayiphi na indlela engavunyelwanga phantsi komthetho osebenzayo; okanye
(d) ungawabandakanyi nawaphi na amatyala angenakho ukubekelwa bucala phantsi komthetho osebenzayo, kwaye, ukuba ungumthengi, amalungelo akho asemthethweni awayi kukhutshelwa ngaphandle okanye ancitshiswe yile Migaqo neMibandela, ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngumthetho.
9.2 Umda kunye nokungafakwanga uxanduva oluchazwe kweli candelo le-9 nakwezinye iindawo kule Migaqo neMiqathango:
(a) ziphantsi kweCandelo 9.1; kwaye
(b) alawule onke amatyala avela phantsi kwale Migaqo neMiqathango okanye enxulumene nomba wale Migaqo neMiqathango, kubandakanywa amatyala avela kwisivumelwano, kwi-delict (kubandakanya ukungakhathali) nokwaphula uxanduva lwasemthethweni, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngenye indlela kwezi.
9.3 Asiyi kuba nabutyala kuwe ngokubhekisele kuyo nayiphi na ilahleko evela kuwo nawuphi na umsitho okanye izehlo ezingaphaya kwamandla ethu.
9.4 Asizukubekwa tyala malunga nayo nayiphi na ilahleko yeshishini, kubandakanya (ngaphandle komda) ukulahleka okanye ukonakala kwinzuzo, ingeniso, ingeniso, ukusetyenziswa, imveliso, ukonga okulindelweyo, ishishini, iikhontrakthi, amathuba orhwebo okanye ukulunga.
I-9.5 Asizukubekwa tyala kuwe malunga nayo nayiphi na ilahleko okanye urhwaphilizo lwayo nayiphi na idatha, isiseko sedatha okanye isoftware, ngokubonelela ukuba ukuba wenza isivumelwano nathi phantsi kwale Migaqo neMiqathango njengomthengi, eli Candelo 9.5 aliyi kusebenza.
9.6 Asizukubekwa tyala kuwe ngokubhekisele kuyo nayiphi na ilahleko eyodwa, engathanga ngqo okanye eyilahleko okanye yomonakalo, ngokuxhomekeka ekubeni wenza isivumelwano nathi phantsi kwale Migaqo neMiqathango njengomthengi, eli Candelo 9.6 aliyi kusebenza.
9.7 Uyayamkela into yokuba sinomdla wokunciphisa uxanduva lomntu kumagosa ethu nakubasebenzi. Ke ngoko, xa ujonga loo mdla, uyavuma ukuba singabanini bamatyala; uyavuma ukuba awuyi kuzisa naliphi na ibango buqu kumagosa ethu okanye kubaqeshwa ngokubhekisele kuyo nayiphi na ilahleko ohlangabezana nayo malunga newebhusayithi okanye le Migaqo neMiqathango (ayizukubeka umda okanye ikhuphe uxanduva lwequmrhu elinamatyala ngokwayo ngezenzo nokushiywa kwamagosa nabaqeshwa bethu).
9.8 Ityala lethu elihlangeneyo kuwe malunga nayiphi na ikhontrakthi yokubonelela ngeenkonzo kuwe phantsi kwale Migaqo neMiqathango aziyi kudlula enkulu kune:
(a) £ 100.00; kwaye
(b) iyonke imali ehlawuliweyo kwaye ihlawulwe kuthi phantsi kwesivumelwano.
(c) ukuba awuhlawulanga mali ukukhuphela izixhobo zethu, ke ubuninzi boxanduva lwethu kukufikelela kuyo nayiphi na ikhontrakthi yokubonelela ngeenkonzo ziya kusetwa kwi- £ 1.00.
10.1 Singayihlaziya le Migaqo neMeko amaxesha ngamaxesha ngokupapasha inguqulelo entsha kwiwebhusayithi yethu.
10.2 Uhlaziyo lwale Migaqo neMeko luyakusebenza kwizivumelwano ezingene nangaliphi na ixesha elilandela ixesha lohlaziyo kodwa azizukuchaphazela iikhontrakthi ezenziwe ngaphambi kwexesha lohlaziyo.
I-11.1 Uyavuma ukuba singabela, sitshintshe, sithathe ikontraki encinci okanye sisebenzisane namalungelo kunye / okanye uxanduva lwethu phantsi kwale Migaqo neMiqathango-ukubonelela, ukuba ungumthengi, isenzo esinjalo asinciphisi iziqinisekiso ezikuncedayo. phantsi kwale Migaqo neMeko.
I-11.2 Awunakho ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ukuba unikezele, ugqithise, utyikitye ikhontrakthi okanye ngenye indlela ujongane namalungelo akho kunye / okanye uxanduva phantsi kwale Migaqo neMiqathango.
12. Akukho kurhoxiswa
12.1 Akukho kophulwa kwalo naliphi na ikontrakthi phantsi kwale Migaqo neMiqathango eya kuthi irhoxiswe ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yeqela elingaphuli mthetho.
12.2 Akukho kurhoxiswa nakuphi na ukophulwa kwalo naluphi na ulungiselelo lwekhontrakthi phantsi kwale Migaqo neMiqathango oluya kuthathwa njengoluthe gqolo okanye oluqhubekayo lokuyekisa nakuphi na ukophulwa kwelo lungiselelo okanye nakuphi na ukophulwa kwalo naliphi na elinye ilungiselelo lesivumelwano.
13.1 Ukuba ukubonelelwa kwale Migaqo neMiqathango kugqitywe yiyo nayiphi na inkundla okanye elinye igunya eligunyazisiweyo ukuba alikho semthethweni kwaye / okanye alinyanzeliswa, amanye amalungiselelo aya kuqhubeka esebenza.
13.2 Ukuba ulungiselelo olungekho mthethweni kunye / okanye olungenakunyanzeliswa lwale Migaqo neMiqathango luya kuba semthethweni okanye lunyanzeliswe ukuba inxenye yalo icinyiwe, elo candelo liya kuthathwa njengelicinyiweyo, kwaye lonke elo gatya liza kuqhubeka nokusebenza.
14. Amalungelo eqela lesithathu
14.1 Isivumelwano phantsi kwale Migaqo neMiqathango yenzelwe thina kunye nenzuzo yakho. Ayenzelwanga ukuba izuze okanye inyanzeliswe nangaliphi na iqela lesithathu.
14.2 Ukusetyenziswa kwamalungelo amaqela phantsi kwekhontrakthi phantsi kwale Migaqo neMeko akuxhomekekanga kwimvume yelinye iqela lesithathu.
15.1 Ngokuxhomekeke kwiCandelo 9.1, le Migaqo neMiqathango iya kuba sisivumelwano sonke phakathi kwakho nathi malunga nokuthengisa kunye nokuthengwa kokukhutshelweyo (kubandakanya ukhuphelo lwasimahla) kunye nokusetyenziswa kolo khuphelo, kwaye kuya kuthatha indawo yazo zonke izivumelwano zangaphambili phakathi kwakho kuthi ngokunxulumene nentengiso kunye nokuthengwa kokukhutshelweyo kunye nokusetyenziswa kwezi zinto zikhutshelweyo.
16. Umthetho nolawulo
Le Migaqo neMiqathango iya kulawulwa kwaye ichazwe ngokuhambelana nomthetho weScots.
16.2 Naziphi na iimbambano ezinxulumene nale Migaqo neMeko ziya kuba phantsi kolawulo olukhethekileyo lweenkundla zaseScotland.
17. Iinkcazo zomthetho nezomthetho
17.1 Asiyi kufaka ikopi yale Migaqo neMiqathango ngokukodwa ngokunxulumene nomsebenzisi ngamnye okanye umthengi. Ukuba siyayihlaziya le Migaqo neMiqathango, uguqulelo olwavumelana ngalo ekuqaleni alusayi kubakho kwiwebhusayithi yethu. Sicebisa ukuba ucinge ngokugcina ikopi yale Migaqo neMiqathango ukuze isetyenziswe kwixesha elizayo.
17.2 Le Migaqo neMeko zifumaneka ngolwimi lwesiNgesi kuphela. Nangona i-GTranslate ifumaneka kwiwebhusayithi yethu, asithathi xanduva ngomgangatho wokuguqulelwa kwale Migaqo neMiqathango eyenziwe lelo ziko. Inguqulelo yolwimi lwesiNgesi kuphela kwenguqulelo esebenzayo ngokusemthethweni.
17.3 Asibhaliselanga iVAT.
17.4 Iwebhsayithi yeqonga lokusombulula iimbambano kwi-European Union iyafumaneka https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Iqonga lokusombulula imbambano kwi-intanethi linokusetyenziselwa ukusombulula iimbambano.
18. Iinkcukacha zethu
I-18.1 Le webhusayithi yeyabanini kwaye iqhutywa liSiseko soMvuzo.
18.2 Sibhaliswe eScotland njengoMbutho waseScotland oBumbeneyo oBhalisiweyo phantsi kwenombolo yobhaliso i-SCO 44948. Iofisi yethu ebhalisiweyo iseMelting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK..
18.3 Indawo yethu ephambili yeshishini iseMelting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.4 Ungaqhagamshelana nathi:
(a) ngeposi, kusetyenziswa idilesi yeposi enikwe apha ngasentla;
(b) ukusebenzisa ifom yoqhakamshelwano lwewebhusayithi yethu https://rewardfoundation.org/contact/;
(c) ngomnxeba, kwinombolo yoqhakamshelwano epapashwe kwiwebhusayithi yethu amaxesha ngamaxesha; okanye
(d) nge-imeyile, usebenzisa contact@rewardfoundation.org.
Inguqulelo-21 Okthobha 2020.